Russie 2018 : Nalalaka ny lalan’i Bresil hiatrika ny ampahefa-dalàna
03/07/2018 admintriatra 0
Na dia nampitaintaina ihany aza, nalalaka ny lalan’i brésil hiatrika ny ampahefa-dalàna. Lavon-dry Neymar sy ny ekipany tamin’ny isa 2 no 0 i Mexique omaly tamin’ny lalao fahatelo tamin’ny ampahavalon-dalàna. Anisan’ireo ekipa goavana tafita amin’ny …Tohiny
Minisiteran’ny kolontsaina : Naneho ny alahelony sy ny sakana ireo solotenan’ny mpanakanto
Anisan’ireo minisitera faralahin’olona hatrany hatramin’izay. Taorian’ny fiovan’ny mpikambana ao anatin’ny governemanta, nihaona tamin’ireo mpikambana ao amin’ny sendikan’ny mpanakanto eto Madagasikara ny minisitry ny kolontsaina, ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka, Johasy …Tohiny
Maurice Tsihavonana Ramanandraibe : Nodimandry omaly atoandro
Taorian’ ny tsy fahasalamana izay voatery nihidiran’ i Maurice Tsihavonana hopitaly , dia nidaosin’ ny fahafatesana omaly teo amin’ ny faha 58 taonany ity mpanao gazety sady talen’ ny famohan’ ny onjam-peo sy fahitalavitra ON …Tohiny
Ambohidratrimo : Naiditra am-ponja ilay tovolahy namono ramatoabe
Omaly no nentina teo anatrehan’ny fampanoavana etsy amin’ny tribonaly Anosy ilay tovolahy 19 taona namono nahafaty ramatoabe 82 taona , ka nalefa vonjimaika eny Antanimora miandry ny fotoam-pitsaràna azy ity nahavanon-doza ity taorian’izay. Teny amin’ny …Tohiny
Fatim-behivavy miboridana ary lehilahy iray feno dian-java-maranitra no hita teny Tanjombato omaly. Voalaza fa mpifankatia izy ireto ary tsy nisy nahatsikaritra na nandre ny zava-nitranga ny mponina teny amin’ny manodidina. Efa misokatra moa ny fanadihadiana ...Tohiny